अपिको ५ प्रतिशत शेयर धितोपत्र बोर्डमा सूचिकृत
असोज २, काठमाडौं । अपि पावर कम्पनी लिमिटेडको ५ प्रतिशत वोनश शेयर सुचिकृत भएको छ । कम्पनीको १५ औं बार्षिक साधारण सभाबाट आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को मुनाफाबाट पारित गरिएको ५ प्रतिशत वोनश शेयर (कर बाहेक)...
एभरेष्ट बैंकको अग्राधिकार शेयर परिवर्तन गर्न बुक क्लोज
abhiyandaily.com . ८ महीना अघि
असोज २, काठमाडौं । एभरेष्ट बैंकले अग्राधिकार शेयर सर्वसाधारणमा परिवर्तन गर्नेको लागि शेयर दाखिला दर्ता बन्द गरको छ । जसको लागि नेप्सेमा असोज २ गतेदेखि ३० गतेसम्म कारोबार रोक्का भएको हो । बैंकले जा...
शेयरमा लगानी गर्न अर्थमन्त्रीले सुझाएपछि लगानीकर्ता हौसिए, २६.‍९१ अंकले सुधार, 'बिक्री नगर्न ह्�
bizmandu.com . ८ महीना अघि
काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सकारात्मक अभिव्यक्ति दिएपछि शेयर बजारमा २६.९१ अंकले सुधार देखिएको छ। उनले शेयरमा लगानी गर्न अपिल गरेका थिए। अर्थमन्त्रीको सकारात्मक बिचार आइरहँदा लगानीकर्...
दुई दिनमा ३४ अंकले घटेको नेप्से तेस्रो दिन २६ अंकले कसरी बढ्यो?
साताको दुई दिन लगातार दोहोरो अंकले घटेको शेयर बजार तेस्रो दिन मंगलबार भने बढेको छ। दुई दिनमा ३४.०५ अंकले घटेको बजार मंलबार भने एकै दिनमा २६.९१ अंकले बढेको हो। ११२३.८४ अंकबाट कारोबार सुरु भएको बजार...
एभरेष्ट बैंकले किन रोक्यो शेयर कारोबार, ९ गतेसम्म कारोबार बन्द गर्ने निर्णय
काठमाडौं। नेप्सेले एभरेष्ट बैंकको अग्राधिकार शेयरको कारोबार रोक्का गरेको छ। बैंकको असोज १ गतेदेखि ९ गते सम्मका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्जले शेयर कारोबार रोक्का गरेको हो। बैंकको अग्रधिकार शेयर सर्व...
दुई दिन ५० अंकले बढेको बजार १८ अंकले झर्यो, समता लघुवित्तको शेयरमा १० प्रतिशत बढेर सर्किट
काठमाडौं। दुई दिन लगातार बढेर करिव ५० अंकले उक्लिएको शेयर बजार साताको अन्तिम कारोबार दिन १८ अंक घटेर बन्द भएको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले शेयर बजारमा लगानी गर्न उत्प्रेरित गरेको भन्दै बढेको...
धितोपत्र बजार आज पनि उकालो
khabarhub.com . ८ महीना अघि
काठमाडौं– धितोपत्र बजारमा मंगलबार झण्डै २७ अंकले उकालो लागेको शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक बुधबार पनि सोही लयमा अगाडि बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार बुधबार कारोवार मापक नेप्से परिसूचक...
राष्ट्रबैंकले ग्रामिण विकास लघुवित्तको २ लाख ९९ हजार कित्ता शेयर बेच्ने
नेपाल राष्ट्र बैंकले ग्रामिण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर बिक्री गर्ने भएको छ। ग्रामिणमा संस्थापक शेयर रहेको राष्ट्र बैंकले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको २ लाख ९९ हजार ९८२ कित्ता शेयर शेय...
nepalipatra.com . ८ महीना अघि
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ‘अहिले धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने उपयुक्त समय’ भएको टिप्पणी गरेलगत्तै लगातार ओरालो लाग्दै आएको धितोपत्र बजार आज एकाएक बढेको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषको ५८...
Ujyaaloonline.com . ८ महीना अघि
काठमाण्डाै - अर्थ मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले ‘अहिले धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने उपयुक्त समय’ भएको टिप्पणी गरेलगत्तै लगातार ओरालो लाग्दै आएको धितोपत्र बजार मंगलबार एकाएक बढेको छ । कर्मचारी सञ्च...
६ दिनमा भएको क्षति दुई दिनमै पूर्ती भयो, अर्थमन्त्रीको भनाइपछि ५० अंकले बजारमा सुधार
काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले शेयर बजारको विषयमा सकारात्मक अभिव्यक्ति दिएपछि दुई दिनमै शेयर बजार ४९.५९ अंकले सुधार देखिएको छ। बजार लगातार ओरालो झर्न थालेपछि लगानीकर्ता संघ/सस्थाका प्रति...